कोरोना संक्रमित भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी कोमामा, भारत भरि फैलियो मृत्युको खबर « sajhapage
कोरोना संक्रमित भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी कोमामा, भारत भरि फैलियो मृत्युको खबर
प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०७७, बिहीबार १३:३२
एजेन्सी । अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी कोमामा पुगेका छन्। उनलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि समेत भएको छ । सेनाको रिसर्च एन्ड रिफरल (आरएन्डआर) अस्पतालले उनी कोमामा पुगेको पुष्टि गरेको हो ।
उनको गत सोमबार नयाँ दिल्लीस्थित आरएन्डआर अस्पतालमा भर्ना गरेर दिमागमा क्लोट देखेपछि अपरेशन गरेको थियो। अपरेशन अगाडी गरिएको कोभिड-१९ परिक्षणमा उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनि भेन्टिलेटरमा कोमामा रहे पनि मुख्य सूचकहरू भने स्थिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
आज बिहिबार बिहान देखि नै भारतका धेरै मिडियाहरुले पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको मृत्यु भएको खबर दिए पछी उनका छोरा अभिजित मुखर्जीले ट्वीटसमेत गरेका छन्। हेर्नुहोस उनको ट्वीट ।
I urge upon every well wisher to pray for my father’s speedy recovery ! We need them ? https://t.co/7FdYxcUwXR
नयाँदिल्ली, २९ साउन । कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरुको संख्या भारतमा एकै दिन झण्डै ६७ हजार थप भएको छ ।
भारतीय सरकारी अधिकारीहरुले बिहीबार दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ६६ हजार ९९९ जना नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका हुन् । केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सोही अवधिमा कम्तीमा ९४२ जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको पनि जनाएको छ । योसँगै भारतका कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरुको कुल संख्या ४७ हजार ३३ पुगेको छ ।
कुल सङ्क्रमितमध्ये दुई लाख १४ हजार ९८५ जना पछिल्लो २४ घण्टामा सङ्क्रमित भएका जनाइएको छ । त्यसैगरी चार हजार ८३५ जनाको सोही अवधिमा मृत्यु भएको छ । योसँगै विश्वभरी कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएकाहरुको संख्या सात लाख ३७ हजार ४१७ पुगेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले जनाएको छ ।